Ogaden News Agency (ONA) – 10ka December waa Maalinta Xuquuqul Insaanka Caalamka – Shaanbal Faysal Maxumad C/wali
10ka December waa Maalinta Xuquuqul Insaanka Caalamka – Shaanbal Faysal Maxumad C/wali
Waxaa caalamka laga xusayaa maanta – Maalinta Xuquuqda Aadanaha – Shirkii Golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay ee 1948dii ayaa la gudoonsaday in maalin caalamka laga xusso Xuquuqda Aadanaha, taasoo ugu dambayntii la’isku raacay inay noqoto 10ka December.
Ku-tumashada Xuquuqul Insaanka shacabka Somalida Ogadenya ma aha hadda wax ka qarsoon dunida oo dhamaan haya’adaha xuquuqul insaanka u ololeeya ayaa ka hadlay arintaa. Haya’adaha sida aadka uga hadlay waxaa ka mid ah HRW sidoo kale AI iyo Haya’do samafal oo caalami ah oo laga soo saaray dalka loona diiday inay ku noqdaan sida ICRC.
Munaasabaddan caalamka laga xusayo Xuquuqda Aadanaha waxaan ku soo qaadanaynaa warqad uu noo soo diray nin ka mid ahaa maleesiyada Itobiya ay u carbisay laynta shacbka. Wuxuu muwaadinkan oo magaciisa ku sheegay Shaanbal Faysal Maxumad C/wali ka waramayaa siyaabaha loo tababaray maleesiyadan iyo gaboodfalo badanoo uu goobjoog ka ahaa, iyo siyaabaha kala duwan ee dadka shacabka ah loo xasuuqo .. Qoraal dheer oo taariikhi ah ;
Shaanbal Faysal Maxamuud C/wali (Shaanbal Giriig) says:
SHIRKII GARAWE EE CIIDANKA LYUU POLICE-KA EE CABDI UBBO LA GALAY
Cabdi Ubbo in uu san muwaadin dhab ah,ahayn waxa cadaynaya shirkii uu Garawe ku la galay Ciidanka Lyuu Police-ka muddo laga joogo 2 sano.
Waxa uu ugu qud-badeeyay Ciidanka Lyuu Police-ka kuna dhiiri galiyay in ay dhammaan laayaan cid kasta oo lagu tuhmo waxa uu ugu yeedhay Seel oo macnaheedu yahay Taageero ONLF.
Sida sharciga Dastuurka Gumaystaha Itoobiya ku yaala qodobka 16-aad waxa uu odhanayaa qof muwaadin ah naftiisa ku ma waayi karo ama la is ka ma dili karo.
Hadda ba haddii ay wadaniyad jirto ama dowlad dhab ah waa maxay sababta aan u gumaadnay Ummada shacabka deegaanka Ogadenia oo ay u waayeen dhalin yaro badan oo u dhalatay Ogadenia oo gaadhaysa in ka badan 10,000 saddexdii sano ee u horaysay howlgaladii 7-deena Regiments.
Qud-badihii Cabdi Ubbo uu la galay regimentiyo badan waxa ay ka dhan ahaayeen ilaalinta ku xad-gudubka xuquuqul insaanka.
SHIRARKII QARSOODIGA AHAA EE UU LA GALAY SHIIHALAQAYAASHA AMA HORJOOGAYAASHA REGIMENTIYADA LYUU POLICE-KA.
Shirarka qarsoodiga ah ee uu la galay horjoogayaasha regimentiyada waxa ay ku wajahnayd in ay maraan (Stragedy) istaraatiijiyad lagu la dagaamalo Hogaamiyayaasha ONLF.Fikirkiisii waxa uu is tusay in Mas’uul kasta oo la yaqaano sida Sheekh Deeq ama Cabdi Kariim Sheekh Muuse ciidanka Lyuu Police-ku abbaaro qoysaska ay ka dhasheen,xoolahana laga qal-qasho si loogu kalifo in ay caydhoobaan oo ay dagmooyinka soo dagaan qoysaskaasi.
Is la markaasna dhalinta ehelka u ah lagu raadiyo masuuliyiinta ONLF.
Regimenti kasta oo uu dajiyay Tuulo ama degmo waxa uu mas’uul uga dhigay shakhsi Degmada u dhashay oo garanaya Dhammaan qoysaskii ay ka dhasheen xumnaha ONLF-ta Ka mid ka ah.
Qorshahani waxa uu keenay in ay qoysas badani caydhoobaan.
Hadda ba waxa is waydiin leh shakhsiga hadafka Ururka ONLF-ta qaatay iyo eheladiisa maxaa ka dhaxeeyo oo siyaasad ah?
Raashinkaas waxa ajaabi gareeya ama sii kaxeeya malayshiyaadka deg-mooyin kasta ka jira.Ka bacdi markii Degmada lagu dajiyo,raashinkan ma gaadho dadka masaakiinta ah xiliga la qaybinayo.
Waxaa inta badan qaybiya Ciidanka Lyuu Police-ka oo inta badan geeya Qabaleeyada.
Masuul kasta oo ka tirsan Ciidanka Lyuu Police-ka waxa uu qaataa in ka badan 100 kaar ama 200 oo kaar.Lagana yaabo in uu qaato oo uu iibsado ilaa 200-300 oo kiish.
Askarigana waxa ay u qorsheeyaan 5 i laa 6 kiish. Sidoo kale Malayshiyaadka soo ajaabi-gareeyay,soo ilaaliayay i laa 10 kiish.
Maamulka Degmada iyo ganacsatadu waxa ay qaataan baabuuro ayay rartaan. Shakhsiga ON LF-ta ka soo xarooda i laa 50 kiish si ay ugu mooraal galiyaan .
Bulshadii masaakiinta ahayd waxa dhici karta qoys kasta qaybi in ay hesho 10 kiilo inta badana bulshadu maba hesho.
Tani waxa ay ka mid tahay dul-minta bulshada iyo ku xad-gudub ka Raashinka dadkaas abaartu saamaysay ee xooluhu ka dhamaadeen
ee adduunku ugu deeqay oo la musuq maasuqayo si xuna loogu tasarufay.
SIYAASAD XUMADA XUKUUMAD IS KU SHEEGTA:
Waxa ay shaqaale kasta oo Degmooyinka iyo maamulka degmada Jooga si qasab ah uga qayb qaataan hawl galada iyaga oo raacaya (Malatia) Malayshiyaadka Raadsanaya ONLF-ta.
Hadda ba Shaqaalahani,waa sida Dhakhaatiir-ta,Macalimiin-ta,Shaqaalaha staff-ka Xafiisyada iyo Baarla’maanka heer-degmo.
Hawl-galadan waxa ay ku raadsadaan ONLF iyo xumnaha taageera.Shaqaalahan shaqsi kasta waxa lagu qasbaa in uu qori ka soo qaato eheladii waxa ayna u baxaan oo ay aadaan dhulka baadiyaha ah ee dagmo kasta oo ay ONLF-tu ka dhaq-dhaqaado.
Sida badan waxa ay la kulmaan ,kooxo ONLF ah oo baadi goobaya Lyuu-Police-ka ama Military-ga Itoobiya.
Marka ay is arkaan Dhalin yarada Dhakhaatiirta iyo macalimiinta iyo dhalinta aqoon yahanada aha malaha taba-bar ciidan Dhalintan waxa laga yaabaa in ay halkaas ku dhintaan.
Dhalintaas oo anfaci lahayd dadkooda iyo dalkooda,dhalintan waxa ku qas ba hawlgalada Lyuu Police-ka iyo Miletariga Itoobiya.
RAASHINKA WFP UGU DEEQDAY DADKA MASIIBOOYINKA DABIICIGA AY SAAMEEYEEN SIDEE LOO IS TICMAALAA?
Waxa loo isticmaalaa raashinka marka uu soo gaadho dawlad is ku sheegta.Waxa ay degmooyinka u dirtaa raashin saaran baabuur
QURBO JOOGTA IYO BEENTA CABI UBBO
CABDI UBBOwaxaa uu gumaaday umadii gumaaadka umadu ma waxqabadba? jawaabtu waa maya maya umadii gumaadiyo saboolinimo iyo abaaro ayaa ku habsaday oon ayaa u dher xoolihii oo laga gowgoracay ayaa jirta
cabdi ubbo qurbo joogta kalaya oo dalka maalgashada ayuu leeyahay dalku
tolow ma magaalada jigjiga gudeheda kaliyaa huteelada la ga dhisi jigjiga ayaa loo dhisi ma iyagaa shirarka ku geli doona ? goboladii kale meeye degmooyinkii meeye horumarkuu ka shaqeeyey ma baabuurta wasiirada iyo isagu wataa? Ma xafiisyada Jig-jigaa? Ma laamiga illaa birqod baa,ee 20-ka sano la dhisayay ? Horumarka ay dowladi u samayso dalkeeda iyo ummadeedu maxuu yahay? Ciidda uu horumarka u sameeyay waayo? Ma bulshada uu gumaaday baa?
Qurba joogta waxa aan u sheegaynaa in ay riyada Cabdi Ubbo ka fiirsadaan oo ay wax hubsadaan.
shaanbal faysalmax,ud clwali says:
SIYAASAD XUMADDA XUKUMADA DOWLADA ISKU SHEEGTA DEEGAANKA OGADEENYA KAJIRTA
Sidaan ognahay inuu aduunka kajiro siyaasado kaladuwan oo ka turjuma nidaamka Dimuqraadiyada aduunka waxaa laga isticmaalaa labo nidaam oo dimuquraadiyadeed oo kala ah:
a) pronatalist population policy
b) antinatalisti population policy
oo ah nidaam dimuqraadiyadeed oo dowladaha qaatay siyaasadahani dimuqraadiyadeed waxay ugu adeegaan kuna horumariyaan nolosha iyo dhaqaalaha bulshadooda iyo dalkooda waxaa kale oo jita nidaamyo kaligii talis iyo nidamyo boqortooyo ,
ereyga democracy waa eray greeg ah oo macnihiisu yahay demo= bulsho croeta = xoriyad nidaamka dowladnimo markii loo qaatay ereygni waxaa lagu macneeyey democracy oo ah xoriyada bulshada nidamka dowaladnimo waa dowlad ay bulshadeedu si xor ah u soo dooratay oo u adeegta danta iyo horumarka bulshada iyo ilaa linta xuquuqul isaanka iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka iyo horumarinta dalka iyo dhaqaalaha bulshada dowlad u shaqaysa
NIDAAMKA GUMAYSI EE SOOMARAY DEEGAANKEENA OGAADEENYA IYO ITOOBIYADA MAANTA
Sida taariikhda deegaankeena ogaadeenya xusayo degaanka waxaa soo maray nidaamyo gumaysi
a) GUMAYSIGII INGIRISKA oo ahaa mid ku salaysan maskaxiyan kuna wareejiyey itobiya degaankeena ogaadeenya itobiya 1954tii
b) KII dhergiga oo ahaa mida aad u adkaa oo dadka iska daayee xitaa geela xabada la dhici jiray
c)ITOBIYADA MAANTA oo ah mid isticmaalaysa siyaasad mental slavery colonized genocide waa mid ku shaqaynaysa maskax gumaysi gumaad ka danbeeyo oo ay isu adeegsatay umadaydii la isku gumaadaysa sida hadaba ka jirata deegaanka ogaadeenya oo nidaamka ayku shaqayso dowlad isku sheegta nidam looga soo yeedhiyo ADIS ABABA kuna sha qeeyaan cabdi ubbo iyo daa,uud amxaar nidaamka oo lagu gumaadayo umadaydii sidee looga gudbi karaa?
su aalo a) waamaxay siyaasi? b) maxaytahay siyaasadi?
shaanbal faysalmaxudcalwali says:
HADII AAN KA JAWAABNO SU , LAHAN
a)siyaasi waa xubin ama shaqi u7 diyaar garooba in uu umadaiisa iyo dalkiisa waxa u qabto, horumariyo islamarkaasna mashakxdiisa iyo naftiisa iyo hantidiisa u hura bulshadiisa siduu ugu adeegi lahaa ee aan ku xisaabtamin 9 KURSI aan lahyn nin jaclaysi daacd nimo leh qabyaaladi ka dheertahay kuleh bulshadiisa shraf iyo sumcad habeen iyo maalin u taagan siduu umadiisa iyo dalkiisa u horumarin lahaa , wax ugu qaban lahaa
b) siyaasadi waanidaam xukumadi ama ururdejisto oo ku wajahan sidii uu ,ururkaasi am xukumadaasi si dimuqraadiyadeed umadeeda iyo dalkeeda waxa ugu qaban lahayd uguna adeegi lahay dhinaca horumarka bulshada iyo wadanka una kobcin lahayd dhaqaalaha io nolosha bulsahdeeda sida nidaamka diuqraadiyaded ee ka jira dunida caalmka loona ilaalin lahaa xuquuqul isaanka iyo xuquuqda nafta mu iyo ilaa linta shuruucda caalamiga ah ee qarmada midoobay wadinka